ဝန်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ချက်များ - ASFO စတိုး
a. ယင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် www.asfo.store ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူသည်ဤစာရွက်စာတမ်းပါအချက်အလက်များနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနှင့်အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကိုဖတ်ပြီးနားလည်၊ သဘောတူခဲ့သည်ဟုလုံးလုံးလျားလျားယူဆသည်။
b. အသုံးပြုသူသည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပြည့်အဝ၊ Sousa Torres SA ဆေးဆိုင်သည်အသုံးပြုသူများမှပေးပို့သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်အတွက်မျှတာ ၀ န်ယူစရာမလိုပါ။
c. Sousa Torres ဆေးဆိုင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးပြုသူများသည် ၀ န်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအသုံးပြုရန်တရားဝင်အသက်၊ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းအတွက်အဓိကအရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်းမှတစ်ဆင့်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ထိုက်တန်သော၊
d. အသုံးပြုသူသည်အသုံးပြုရန်ကတိက ၀ တ်ပြုသည် www.farmaciasousatorres.com ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ရည်ရွယ်ထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရရှိနိုင်သည့်ကြားခံနှင့်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်၊ တရားမဝင်သောရည်ရွယ်ချက်များအားဖြင့်သို့မဟုတ်၎င်းကိုမသင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုရန်မကြိုးပမ်းဘဲတစ်ခုတည်းအတွက်သာဖြစ်သည်။
e. Sousa Torres ဆေးဆိုင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) အင်္ဂါရပ်များအသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးရန်နှင့်အသုံးပြုသူမှတရား ၀ င်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အပြုအမူအားမလိုက်နာသောအခြေအနေများတွင်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုထားသည်။ သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သည့်အခါသင့်လျော်သောအာဏာပိုင်များအားဥပဒေနှင့်မညီသောလုပ်ဆောင်မှုများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းသူများကဖုန်း၊ အီးမေးလ်၊ ဖက်စ်၊ စာသို့မဟုတ်အခြားဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ပေးသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မဆိုစျေးဝယ်သည့်အခါ ၀ ယ်သူအားအသိပေးခြင်းနှင့်ကူညီခြင်း၊ သက်ဆိုင်သောအခါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိကုန်ပစ္စည်းပုံရိပ်များသည်လိုင်းမှ ၀ ယ်ယူသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်လုံးဝမတူပါ။ ထုတ်ကုန်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုထုတ်လုပ်သူမှပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောသတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်မရှိပါ။
အကယ်၍ ယာယီစတော့ရှယ်ယာအခြေအနေများမရှိပါက ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏အမှာစာကိုပေးပို့ခြင်းမပြုလုပ်မချင်းဆိုင်းငံ့ထားမည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ပျက်လာသောအခါဖောက်သည်အားမှတ်ပုံတင်ထားသောအီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ သင့်မှာကြားမှုတွင်ချက်ချင်းနှင့်ချက်ချင်းမရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များပါ ၀ င်ပါကသင်မှာယူမှုကိုခွဲနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Customer Customer Service သို့ ဆက်သွယ်၍ အမှာစာနှစ်ခုလုံးကိုသီးခြားစီပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အထူး & ဘောက်ချာ
သငျသညျအခါအားလျော်စွာမှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.asuafarmaciaonline.pt ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ဖြန့်ကျက်အထူးနှင့်ဘောက်ချာစတိုးဆိုင်။
•သင်သာအသုံးပြုနိုင်သည် တစ် ဝယ်ယူမှုနှုန်း;
•ဘောက်ချာကုဒ်ကိုဈေးဝယ်လှည်းထဲသို့ထည့်သောအခါနောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်များ (စာတိုများ) ပေါ်လာလိမ့်မည်။
•သင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Customer Support Service သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများတွင် VAT ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပရှိဖောက်သည်များ၏ ၀ ယ်ယူမှုများသည် VAT တွင်မပါ ၀ င်ပါ။ ထုတ်ကုန်များနှင့်ပို့ဆောင်ပေးမည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ စာပို့ခအတွက်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများသည်ယခင်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်သည်။
a. ASFO ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှအသုံးပြုသူက ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းနှင့်ပြန်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအားလုံးတွင်ဖော်ပြထားသည် ဘယ်လိုအမိန့်, ဝယ်ယူဆေးဝါးများ, အမှာစာများပေးပို့ခြင်း, ငွေပေးချေမှုရမည့်နည်းလမ်းများ နှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း, လဲလှယ်နှင့်ပြန်လာ စာရွက်စာတမ်းများ။
b. Sousa Torres ဆေးဆိုင်သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှန်ကန်စွာနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပြုသည်။ အထူးသဖြင့်စျေးနှုန်း၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ ပေးပို့ခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ဖော်ပြချက်များ၊ တင်ပြချက်များနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ရုတ်တရက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဈေးနှုန်းအတက်အကျ၊ ကွန်ပျူတာချွတ်ယွင်းမှုများသို့မဟုတ်မသိသောအချက်များအား Sousa Torres ဆေးဆိုင်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းတို့ကြောင့်မမျှော်လင့်သောအမှားများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
c. အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ပေးပို့မှုသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုအခြေအနေများပြောင်းလဲခြင်းတွင်အသုံးပြုသူမှပြုလုပ်သောအမှာစာများလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အခြား ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ၊ အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ပေးပို့မှုသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုအခြေအနေများပြောင်းလဲသွားပါကအသုံးပြုသူအားချက်ချင်းဆက်သွယ်လိမ့်မည် အီးမေးလ် (သို့) ဖုန်းဖြင့်တစုံတ ဦး ကိုအကြောင်းကြားပြီးပြောင်းလဲမှုများကိုရှင်းပြနိုင်ပြီးအခြေအနေအသစ်များလက်ခံခြင်းကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။
d. Sousa Torres ဆေးဝါးသည်သုံးစွဲသူများအားအမှားအယွင်းများတင်ပြခြင်းနှင့်အီးမေးလ် (info@asuafarmaciaonline.pt) မှတဆင့်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအခြားမည်သည့်အဆက်အသွယ်များမှတစ်ဆင့်အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်များပေးပို့ခြင်းကိုအသုံးပြုရန်တောင်းဆိုသည်။ အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေဆိုရန်ကြိုးစားပါ။
လက်ရှိအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကိုလက်မခံခြင်းသည် Sousa Torres ဆေးဆိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာမှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ပါ ၀ င်မှုများကိုပါဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။